Yiqiniso, wena wezwa origami. Empeleni, kuba ubuciko iphepha alo izibalo ahlukahlukene, owasungulwa ngo Japan lasendulo. sibalo ngasinye ngokwesiko okwenziwe kusuka tikwele emsebenzini kungamukelwa ukusebenzisa isikere noma i-glue. Akira Yoshizawa - zakudala abadumile yobuciko - wathi Origami kuyinto geometry abstract, okuyinto siswele semvelo umphefumulo womuntu. Ball noma origami Kusudama - iwuhlobo bendabuko imikhiqizo Japanese zokuhlobisa, okuyinto eyenziwa kule nqubo lasendulo. Babukeka njengezihlahla amabhola kuqoqwa ezihlukahlukene iphepha izimbali, izingxenye noma enethiwekhi. Lezi zici ngabanye okuthiwa amamojuli. Lezi amabhola bheka kahle ngisho ku ingaphakathi Japanese, ngoba okwamanje esiyibonayo ukuxuba enamandla emasiko nemihambo ekuklanyweni.
Kanjani ukuqonda igama elithi "Kusudama"? ke lapha lingase lihunyushwe ngazo kusukela Japanese ngokuthi "ibhola kwezokwelapha." Ezikhathini zasendulo, lezi amabhola zazisetshenziswa Japanese phakathi Kagura - imfihlakalo zenkolo. Wawunodonga isiko ekhethekile, esungulwe ngesisekelo umlingo wama ilanga ihlelo. Ngesikhathi esifanayo amabhola abomvu babe nezimpawu kwelanga, kanye ebusweni sidalwe ikhanda sicindezelwe omunye komunye carnations ephepheni. Lezi amabhola ezibekwe kule amakhona endaweni quadrangular, futhi wakhuthaza imitha izingongolo, eyayibonakala ahlukaniswe izimbali. Manje ibhaluni Origami kuyinto imfanelo esiyisibopho iliphi iholide eJapane, futhi kungakhathaliseki lapho aphethwe ethempelini, endlini noma emgwaqeni. Fans of isiko Japanese emhlabeni wonke, futhi, yakhetha ukusetshenziswa ngalezi zimfanelo iholidi.
Ibhaluni Origami othile nje kubonakala umhlobiso, futhi othile sinikezwe umuzwa imilingo. It zingafakwa phezu embhedeni isiguli, okuzokwenza ukushaja ngayo amandla, ngokwanele ukuba uwulethe entendeni yesandla sakho. Kungase kubonakale zemfihlakalo, kodwa lapha umbono obalulekile kanye nenkolelo ekuphiliseni yayo izakhiwo. Uma umuntu egula uthola isipho esinjalo, ahambe ke njengoba iwuphawu izifiso ukuthi alulame ngokushesha, okungukuthi, njengophawu ukunakekelwa jikelele nokunakwa. ephulukisa isikhashana kuyofika isheshe nge ukwesekwa ngokwengqondo. Yiqiniso, mhlawumbe akusiwona imilingo Shar origami Nokho, ngisho noma baphazamiseka zonke izinhlobo izakhiwo engavamile kulezi izinto, angeke sikhone kusho ngalokucondzile ngendlela ephelele zihlobana wezangaphakathi kanye ukuhlobisa it. Zama wona futhi ngeke kahle lokhu ubuciko obuhle futhi wenze ibhola, bese ukuhlola nemiphumela yaso kwezinye izifo.
Origami: iphepha ibhola yokukhiqiza
Ukuze womshini amabhola zidinga isikhathi esanele ngaphandle izibalo ukuthi akhiwa kwesikwele olulodwa, njengoba ezinye izinto udinga ukusebenzisa ezihlukahlukene amamojuli. inqubo Creation Kwenziwa izifunda kubenzima, ezivame wachaza ngokuningiliziwe. Ngenxa yalesi sifundo ngempela ulingana noma iphepha, imfuneko esemqoka - kwabantu futhi kuyaqina, kanye imiphetho yayo hhayi kusulwe futhi shaggy nge emphethweni eziningi. Leli phephandaba uqobo akusho aphule endaweni ukusonga. Okokuqala sidinga ukwenza izingxenye. Uma bakulungele, badinga ukubamba ndawonye nge glue. Kulokhu, kudingeka uvivinye umzimba ukunemba esiphezulu Kusudama babengenalo ukuqhekeka futhi ibhola okuqinile. Yiqiniso, okokuqala kuzoba nzima ukufeza miphumela, kodwa ngokuhamba kwesikhathi amakhono kuyothuthuka.
Kusudama wenza ekubambeleleni yezinhlamvu, noma uhide lwezinto intambo anombala isibani noma ophahleni. Ukuze ukuhlobisa ibhaluni origami ungenza ibhulashi zingu okumele kuvikelwe kusuka phansi, futhi kungase kufakwe intambo yemincamo ezinemibala. Ungakwazi baveze nemicabango yabo futhi ubuntu ngenkathi kudalwa amabhola indalo yakho wayengafani anything phi ezahlukene.
Brownie ngezandla zabo: isigaba inkosi onodoli. Indlela thunga domovenka burlap ngezandla zabo?
Amaminerali Strange atholakala eSiberia bangase babe kukawoyela Ngokuzayo
Zhirkova Inna - Yuri Zhirkov nomkakhe uNkk Russia. Inkazimulo, okuyinto yena akazange dream
Ngempumelelo izidakamizwa "normodipin" Iziyalezo yokusetshenziswa
Ukufakwa kokumqoka kuphela "Interskol DA 14,4ER": incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Synovitis we ngokuhlanganyela iqakala: ukwelashwa, izibuyekezo, izithombe, izizathu